Hay’adda nabad-sugida oo war ka soo saartay weerarkii Kismaayo ee lagu dilay saraakiisha Al-shabaab
Mjournal :–War-saxaafadeed ka soo baxay hay’adda nabad-sugida Qaranka, ayaa lagu faah faahin weerar lagu dilay saraakiil sare sare oo ka tirsanaa Al-shabaab. War-saxaafadeed ayaa u dhignaa siddan : Weerarkii cirka ahaa ee habeenkii Axadii Axadda ay taariikhdu ku...
Ciidamada dowladda oo soo gabagabeyay howlgalkii hotelka Ambassador
Mjournal :-Ciidammada kala gadisan ee dowladda Soomaaliya, ayaa ugu danbeyntii ku guuleystay in ay soo afjaraan howl galkii ka socday Hotelka Ambassador, halkaasoo shalay galab Al-Shabaab ay weerareen, iyadoo howl galka ka socday hotelka uu qaatay in ka badan 10-saac. Wakaaladda...
Madaxda dowladda si isku mid ah u cambaareysay weerarka hotelka Ambassador
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud iyo Ra’izulwasaarahiisa Cumar Cabdirashiid Cali Sharma,arke ayaa si kulul u cambaareeyey weerarki xalay lagu qaaday hotel Ambassador ee Magaalada Muqdisho. Bayaan kasoo baxay xafiiska...
Rasaas goos goos ah oo wali laga maqlayo agagaarka hotelka Ambassador
Mjournal :-Waxaa muuqata in aan wali la soo afjarin weerarki ay kooxo hubeysan oo loo maleynayo in ay yihiin Al Shabaab ku qaadeen hotelka Ambassador ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ku sugan agagaarka hotelka ayaa sheegaya in wali la maqlayo rasaas teel teel ah iyo qaraxyo...
Labo xildhibaan oo la sheegay in ay ku dhinteen hotelka Ambassador
Mjournal :-Warar goor dhaw soo baxay ayaa sheegaya in illaa labo Xildhibaan ku geeriyoodeen weerarka Hotel Ambassador, iyadoo wali uu socdo howl galka. Xildhibaan C/llaahi Jaamac Kaba-weyne iyo Xildhibaan Max\_uud Max’ed Guure ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka...
A huge explosion and gunfire have been reported at a hotel in the Somali capital, killing at least 10 people. Al-Shabab fighters claimed responsibility for Wednesday’s attack targeting Mogadishu’s Ambassador Hotel, which is frequented by diplomats. “We attacked the hotel with a...
Wararkii ugu danbeeyay xaalada hotelka Ambassador
Mjournal :–Waxaa wali isa soo taraya wararka ku saabsan weerar ismiidaamin ah oo galabta qorax sii dhicii lagu qaaday hotelka Ambassador oo ku yaala wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo Ciidamada ammaanka ay wadaan howl galo lagu bad baadinayo dadka ku go’doonsan gudaha hotelka...
Warar dheeraad ah oo ku saabsan weerarka hotelka AMBASSADOR
Mjournal :-Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin iyo mid toos ah oo xilligii casir liiqii lagu qaaday Hotel Ambassador oo ku yaala jidka laamiga ee Wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho. Dabley hubeysan ayaa gudaha u gashay Hotelka, kuwaasoo ka...
Weerar ismiidaamin ah oo goor dhaw gil gilay Muqdisho
Mjournal :- Weerar isugu jiray is miidaamin iyo mid toos ah ayaa goor dhow oo galabta casir liiqii ah lagu qaaday Hotelka Ambassador ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla wadada muhiimka ah ee Maka Al-Mukarama. Goob joogayaal ayaa sheegaya in weerarka oo ku bilowday gaari waxyaabaha...
Ciidammada dowladda oo dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab
Mjournal :–Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in la soo bandhigay meydadka afar ka mid ah Al-Shabaab, kuwaasoo lagu dilay howl gal ka dhacay deegaanka Buulo Gaduud oo qiyaastii 30KM u jirta Kismaayo. Wasiirka Amniga Jubbaland C/rashiid Xasan Cabdi Nuur oo...
Baarlamaanka oo maanta ka shiraya soo gabagabeynta howlaha hor yaala
Mjournal :-Xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah yeelanaya kulankoodii u horeeyay tan iyo markii todobaad ka hor Madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray xeer uu ku meel mariyay hanaankii doorashooyinka. Kulanka maanta ayaa looga hadli doonaa shuruucda...
Xog-hayaha arimaha dibada Britain oo Muqdisho ku soo fool leh
Mjournal :-Xog-hayaha Arrimaha Dibadda dowladda UK Philip Hammond ayaa maalinta berri lagu wadaa in booqasho hal maalin ah ku yimaado magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya. Mr Hammond ayaa la kulmi doona Madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo kala hadli doona...
Madaxweynaha Turkiga oo gaaray magaalada Kampala
Mjournal :-Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa safarkiisa Geeska Afrika ku bilaabay magaalada Kampala ee dalka Uganda, kadib markii uu marti-qaad rasmi ah uu ka helay dhiggiisa Uganda Yoweri Museveni. Madaxweyne Erdogan oo socdaalkiisa ay ku wehliyaan Marwadiisa...
Shirkii madasha -wadda-tashiga Qaran oo maalintii afaraad galay
Mjournal :-Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ayaa galay maalintii afaraad, waxaaana shirkan lagu waday in lagu soo gaba-gabeeyo saddex casho, balse dib u dhac ayaa ku yimid, kaddib markii la sheegay inay jiraan qodobbo weli la isku hayo. Hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee Kulankan ka...
Ciidammada sirdoonka oo qabtay walxaha qarxa iyo eedeysanayaal
Mjournal :–Ciidammada sirdoonka Qaranka ayaa qabtay gaari ay saaranyihiin hub iyo walxaha qarxa, kaas oo hayaddu sheegtay in la doonayay in lagu qalqalgaliyo Ammaanka Magaalada Muqdisho. Afhayeenka Wasaaradda Amniga C.kaamil Macalin Xirsi oo la hadlay wakaaladda wararka...